August 15, 2019 - ThutaSone
အဖေ့ကိုလည်း နောက်ထပ် မမြင်ချင်တော့ဘူ“ဖခင်အရင်း၏ ရမက်အတွင်း ကြွေကျခဲ့ရသော ပန်းကလေးတပွင့်”
August 15, 2019 ThutaSone 0
အဖေ့ကိုလည်း နောက်ထပ် မမြင်ချင်တော့ဘူ“ဖခင်အရင်း၏ ရမက်အတွင်း ကြွေကျခဲ့ရသော ပန်းကလေးတပွင့်” သားသမီးဆိုတာ ကိုယ့်ရတနာ၊ ကိုယ့်မျိုးဆက်၊ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လိ့ု ဖခင်တိုင်းက ခံယူထားကြတယ်။ ဖခင်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီးတွေအပေါ်မှာ သူများတွေရဲ့ ရန်ပြုမှာကို ကာကွယ်ရမယ်၊ မြေတောင်မြှောက် ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိက ဖခင် ၁၀ ဦးမှာ […]
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှရ၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှရ၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ TNLAတအောင်း၊ SSAရှမ်း၊AAရခိုင်၊MNDAAကိုးကန့်၊ KIAကချင်ပူးပေါင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တွေကို ကြည်းတပ်ကလည်း ခြေလျင်တပ်၊ခြေမြန်တပ်၊နယ်မြေခံတပ်တွေနဲ့ နောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်နေပါတယ်။ လေတပ်ကလည်း Mi35တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါ လိုက်ပစ်နေပါတယ်။ သောင်းကျန်းသူတွေက စစ်ယူနီဖောင်းမဝတ်ပါဘူး…. အရပ်သားလိုဝတ်ထားပြီး သာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲဝင်ရော ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ကြတယ်…. ညအမှောင်ကို အားကိုးပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေမှာ […]
မိဘရဲ့ မေတ္တာဆိုတာ…….ဆင်းရဲပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်သမျှရောင်းချပြီး သားဖြစ်သူပါရဂူဘွဲ့ရအောင် ထောက်ပံ့ခဲ့သော လယ်သမားကြီး
မိဘရဲ့ မေတ္တာဆိုတာ…….ဆင်းရဲပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်သမျှရောင်းချပြီး သားဖြစ်သူပါရဂူဘွဲ့ရအောင် ထောက်ပံ့ခဲ့သော လယ်သမားကြီး မိဘရဲ့ မေတ္တာဆိုတာ ဘာနဲ့မှနှိုင်းလို့မရအောင် ကြီးမားတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ တော်တော်များများ က မိဘနှစ်ပါးမှာ အမေကို ပိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိသားစုအတွက် အနစ်နာခံပေးဆပ်နေကြတဲ့ အဖေ တွေလည်း အများကြီးပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြောက်ပိုင်းက လယ်သမားကြီးတစ်ယောက်ဟာလည်း […]
မသေခင်ကဇနီးသည် ပေးသွားတဲ့ ပေဗူးလေး ပြုတ်ကျသွားလို့ တံတားအောက် ခုန်ချပြီး ဆင်းဆယ်တဲ့ အမျိုးသား
မသေခင်ကဇနီးသည် ပေးသွားတဲ့ ပေဗူးလေး ပြုတ်ကျသွားလို့ တံတားအောက် ခုန်ချပြီး ဆင်းဆယ်တဲ့ အမျိုးသား တစ်ခါတစ်လေမှာ တချို့သော အရာတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် ငွေကြေးနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ တန်းဖိုးအားဖြင့် သေးသေးကြီးကြီး ကိုယ်တန်းဖိုးထားတဲ့ ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အခုလည်း အသက် ၄၁နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ပန်းပဲဆရာတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဇနီး […]
ကျွန်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားအမှု သိန်း (၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြန့်ဝေမှုအပေါ် ကိုဘုန်း ရှင်းပြီ
ကျွန်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားအမှု သိန်း (၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြန့်ဝေမှုအပေါ် ကိုဘုန်း ရှင်းပြီ ရှင်းပြီ ကျွန်တော်က သိန်း( ၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူအပေါ်ကို သတင်းအဆိပ်ကျွေးကျတယ်။ ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ မဟုတ်တာမှန်းသိလျက်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်မှုကြောင့် တိုက်ခိုက်ပြီးရေးသားတယ်… ဒါကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့ ပြန်လည်မ ျှဝေတဲ့သူတွေကို စဉ်းစားမရတာက အဲ့လောက်အယုံလွယ်သလားလို့ပါ၊ တကယ်ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါလား ခုချိန်ထောင်ထဲရောက်နေလောက်ပါပြီ […]
ပြင််ဦးလွှင်မှှ သေဆုုံးသွားသူလေးရဲ့ မိသားစုု
ပြင််ဦးလွှင်မှှ သေဆုုံးသွားသူလေးရဲ့ မိသားစုု 15.8.2019မနက်​်5နာရီ15မိနစ်​ခန်​့် ပြင်​ဦးလွင်​မြိ ု့ ပစ်​ခတ်​ခံခဲ့ရသူ ထမင်​းချက်​ဝန်​းထမ်​းတစ်​ဦး​သေဆုံးပြီးနောက်် မိိသားစုများသနာစရာ​ကောင်​းလှပါသည်​် သူမိိဘ​တွေရင်​ကွဲရပါပြီ သေဆုံံးသူက​ယောကျ်ား​လေးပါ ကျန်​်ခဲ့တာကမိိသားစုဝင်​​တွေပါ Phyu Zar Win
ဒကာမတစ်ယောက်က ကားဝယ်စီးဖို ့လှူခဲ့တဲ့ အလှူငွေ သိန်း(၁၅၀) ကျော်ကို ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ပြန်လှူခဲ့တဲ့ ဆရာတော်
ဒကာမတစ်ယောက်က ဆရာတော်ကို ကားဝယ်စီးဖို့ အလှူငွေ သိန်း ၁၅ဝနဲ့ ဒေါ်လာ (၁၅၀၀) ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ဒီအလှူငွေတွေကို ဆရာတော်က ဆေးခန်းဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်က ဒီအလှူငွေတွေကို ပင်းတယမီးရှင်ဆုရ ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်က ခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဒကာမကြီးတစ်ယောက်က […]
ထာင်ပေါင်းများစွာသောခရီးသည်ကားများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များဂုတ်တွင်းလမ်းမပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့နေပုံ.. ဂုတ်တွင်းလမ်းမပေါ်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောခရီးသည်ကားများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များပိတ်ဆို့နေပုံ.. … ညမိုးချုပ်လာပြီဆိုရင်တော့ လုံခြုံရေးကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ကြရတော့မယ်… Credit: KO SiThu Maung
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲသတင်း ( ၁၀း၃၀ ) နာရီအချိန်
(၁၅.၈.၁၉ )ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲသတင်း ( ၁၀း၃၀ ) နာရီအချိန် TNLAတအောင်း၊SSAရှမ်း၊KIAကချင်ပူးပေါင်းထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့က ခန့်မှန်း အင်အား ၃၅ဝလောက်နဲ့နေရာစုံက ဖြန့်တိုက်နေတာပါ။ ကွတ်ခိုင်ကတပ်တွေဆင်းလာပါပြီ၊မိတ္ထီလာကို ရဟတ်ယာဉ်တွေရောက်ပြီ၊နာမည်ကြီး တပ်မ၉၉ကို အနီးဆုံးနေရာမှာချပေးမယ်ကြား ၊ရှမ်းတဲကတိုက်လေယာဉ်တွေတက်သွားပါပြီကြည်းတပ်နဲ့ လေတပ်ပေါင်းပြီး ဝိုင်းပတ်ချေမှုန်းတော့မှာပါ။ တံတားကင်း၊ရဲကင်း၊ပြည်သူ့စစ်ကင်းတွေကျကုန်ပါပြီ၊ နောင်ချိုတိုးဂိတ်ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကားကြီးသမားအချို့ကို ဓားစာခံလုပ်ဖမ်းထားပါတယ်။ သံချပ်ကာတပ်တွေတက်မရအောင် […]
ရဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို ချွေးနည်းစာနဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ ရံပုံငွေနဲ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေက စိုး်ရိမ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပြည်သူတွေက စုပေါင်းပြီး ကယ်ဆယ်ကူညီရေးတွေ လုပ်ကိုင်ပေးနေသလို အနုပညာရှင်များကလည်း သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ […]